masoaryro LED bozaka fahazavana mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > bozaka Light > Solar bozaka fahazavana > masoandro LED bozaka fahazavana
masoandro LED bozaka fahazavana
izany maryany polycrystalline silisiôma masoaryro nynnynana, izay manana fifadian-kanina fa mamaly ny hafainganam-paryeha ary avo fahazavana fiovam-po tahan'ny. izany afaka ho feno naryidy in 6-8h ary afaka asa ny ny IOh. Light maso manan-tsaina inductiamin'ny jiro hoad, fahazavana-camin'nytrolled inductiamin'ny fitaovana, afaka kosa amin'ny ny fahazavana in ny maizina ny andro, 18 LED jiro hoads.
Rafitra jiro feno herinaratra azo avy amin'ny masoandro dia: loharano maivana, mpanodina, bateria, mody masoandro ary vatan-jiro.
Rehefa ny hazavan'ny masoandro mamirapiratra amin'ny sela solar, dia mamadika ny herin'ny jiro ho angovo elektrika ny herin'ny masoandro ary mitahiry ny angovo herinaratra ao anaty bateria amin'ny alàlan'ny circuit circuit. Aorian'ny maizina, ny herinaratra herinaratra ao amin'ny bateria dia ny herin'ny fitantanana fantsom-pifandraisana ho an'ny loharanon'ny jiro mavo an'ny herin'ny jiro. Rehefa maraina ny andro ny ampitso maraina, dia nijanona ny famatsiana ny herinaratra ny jiro, nivoaka ny jiro ary ny bateria ny masoandro dia nanohy ny fametrahana ny bateria ary nivezivezy miverina. Ny Controller dia mandalo bitika tokana mikrôkomputer sy sensor iray, ary mifehy ny fanokafana sy famaranana ny ampahany amin'ny loharanom-pahazavana amin'ny alàlan'ny fanangonana sy fitsaràna ny hazavana jiro. Ny vatan'ny jiro dia miantehitra amin'ny fiarovana ny rafitra sy ny haingo antoandro mba hahazoana antoka ny fandidiana mahazatra an'ity rafitra ity. Anisany, ny loharanom-pahazavana, fanaraha-maso ary ny bateria no fanalahidy hamaritana ny fahitana ny tontolon'ny jiro.
Hot Tags: masoandro LED bozaka mazava, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style
bozaka jirobozaka Light
LED ivelan'ny trano bozaka masoandro tany fahazavana